Goodyear Dunlop Sava Tyres - brand ethandwa, kungase kutholakale emhlabeni wonke ukukhiqizwa eliphezulu kanye nokusebenza amathayi sokusebenza. Slovak brand Sava silwenza amathayi izinhlobo ezahlukene phansi zokuthutha, timbiwa izimpahla emazweni ahlukahlukene emhlabeni jikelele. Popular imodeli akhiqizwa 2012, Sava Eskimo Stud amathayi uyawuthanda sisikhulu phakathi abanikazi imoto, ngenxa eliphezulu nokushayela izici.
Kulesi sihloko sizohlola:
Umlando wenkampani Sava.
Izibuyekezo Sava Eskimo Stud.
Sava Eskimo Stud - test amathayi.
Umlando azalelwa inkampani Sava
Umsuka wegama inkampani okwenzeka emzini Slovenian ka Kranj eminyakeni ecishe ibe ngu-100 edlule. Ngo-1920, osomabhizinisi ezine ziye zazibandakanya ukudala inkampani okuthiwa Atlanta Landa / thumela Inkampani, ngokushesha uqambe Vulkan. Ngalesi isitshalo iqala ukukhiqizwa imikhiqizo ehlukahlukene iraba, kuhlanganise izicathulo amathe.
Ngo-1931, inkampani iye ezihambelayo Austrian kuhanjiswa izigaba ukuze Semperit, ivolumu ukukhiqizwa yayo likhula ngokushesha, futhi ngakhula emakethe umthengi. Ngemva konyaka - ngo-1932 - inkampani iqala ukukhiqiza ibhayisikili amathayi.
Ngo-1939, ukuphathwa inkampani wayiswa kwelinye abakhiqizi elikhulu imikhiqizo iraba Continental Gummi - Werke AG. Ngo-1946-ke kabusha ukukhiqizwa ezimoto nokushintsha igama lenkampani. Kusukela ngaleso sikhathi, kuyothiwa 'Sava "- ngemva komfula agelezela Slovenia futhi kuvela ezintabeni wendawo.
Isiphetho obengeziwe inkampani ahlobene ekuzuzweni kwemiPhumela injongo yaso isondo ezimakethe zomhlaba. ukuphathwa kwenkampani kuyinto ngenkuthalo nesithakazelo kule ukuthuthukiswa nokwenziwa ngcono ikhwalithi amathayi, ukusetshenziswa kobuchwepheshe obusha ukukhiqizwa.
ukuthuthukiswa Active lenkampani
Ngo-1965, inkampani waqala ukudayisa ngowokuqala tubeless isondo ngesivinini Inkomba. Ngo-1974 yena wethula ukukhiqizwa amathayi osabalalayo, luqiniswe metal izintambo, okuyinto baziwa ukuqina yabo nemihuzuko ukumelana.
Ngo-1992 inkampani uthola edumile isitifiketi SIST ISO 90011995, eqinisekisa izinga okusezingeni imikhiqizo yayo. Ngokushesha ovelele inkampani American Goodyear iTire & Rubber Inkampani atholwe esigxotsheni elilawulayo e Sava, okwakusho ukuthi ushintsho yayo uqobo inceku kumnikazi okuyinhloko.
Kusukela ngo-1998, i-Sava amathayi oluqanjwe Goodyear iTire control. ukukhiqizwa iqala ngenkuthalo sikhule Kusukela ngaleso sikhathi, izitshalo ezintsha, ukwenyuka yokuthengisa umthamo (ngonyaka ka-2000 sasifana nokuthi amathayi abayizigidi ezingu-6,5) lakheke.
Ngo-2004, Goodyear atholwe esigxotsheni egcwele inkampani Slovenian, ekubeni umnikazi waso.
Inkampani Sava namuhla
Namuhla inkampani iyona Sava ngobukhulu emikhiqizweni Slovenia ibhizinisi yokukhiqiza zenjoloba. Ngokusetshenziswa ubunjiniyela design kanye ubuchwepheshe bamuva, inkampani ukhiqiza imikhiqizo high ukuthi kalula ancintisane ehola ibhasi Holdings. Isitifiketi ISO 9002, ISO 9001, ISO 16949, i-TS, EAQF ukuqinisekisa izinga imikhiqizo yayo kanye nemiklomelo emkhakheni ukukhiqizwa amathayi. Ngaphezu kwalokho, inkampani ine izitifiketi efana ISO 14001, esiqinisekisa ukuphepha kwemvelo ibhizinisi.
Sava amathayi ekhiqizwa ngesikhathi izitshalo amaningana aseYurophu. Lesi sitshalo lokuqala, elise Slovenia, emzini Kranj, ingenye izinkampani ayihlomele kakhulu futhi ngobuchwepheshe eziphambili eYurophu. Ngo umfelandawonye Goodyear, Fulda, Dunlop, lokhu inkampani liye landa usithonye ezimakethe zomhlaba.
imikhiqizo imbande wale nkampani bayindlala kakhulu phakathi abashayeli abaningi, sibonga eliphezulu zalungiselelwa kufinyeleleke intengo iphuzu.
Ngezinye isitshalo yenkampani enezisebenzi 1600, abasebenzi yenkampani. Le nkampani ithole imiklomelo eminingi, eqinisekisa impumelelo yayo emkhakheni wezokuphepha emsebenzini kanye nemvelo.
Winter amathayi elidumile izinkampani Slovenian Sava, imodeli Sava Eskimo Stud nge studding, kukhona amathayi ezingabizi futhi esinokwethenjelwa ngokwedlulele kunazo futhi kunzima izimo ukushayela ebusika. Spikes akheke eziyisithupha, okuyinto Ithuthukisa kakhulu kuheleza isondo, le transverse kanye slippage longitudinal.
Ngenxa yimpandla iphethini ekhethekile, Sava Eskimo Stud imodeli has okusezingeni eliphezulu exchange rate nokuzinza lateral ngoba aqondisa eziyinkimbinkimbi futhi cornering. amathayi okunjalo ekhuthaza abanikazi imoto impendulo fast and eqondile imiyalo amasondo ayo, ukuqinisekisa uzinzo zonke izimo zezulu.
Wide, lwavutha imiphetho lula amanzi anemifantu umswakama leso adonswa kusuka okusanhlamvu isondo seqhwa, ukunciphisa ingozi aquaplaning emigwaqweni liphekwe ebusika. Tyres Sava Eskimo Stud kumele afakwe ngokuvumelana imiyalelo - bebheke imicibisholo noma imibhalo eqoshiwe (Ukuphendula), esisogwini sidewall isondo.
Uma kwenziwa ithayi ukusebenzisa ubuchwepheshe bamuva. Ngokwesibonelo, yimpandla yayo yakhelwe nge ubuchwepheshe ethandwa ezifana V-tred, okuyinto ukuthuthukiswa nokuphathelene nazo Goodyear. Lusebenza cishe wonke amamodeli ebusika lokhu brand. Special iphethini ziyalingana njengoba herringbone engcono ikhuthaza umswakama adonswa usesondweni, ethuthukisa amathayi elihlangana umsebenzi at ngesivinini esikhulu ezinyakazayo. Iziteshi Amanzi ahlelwe nge-engela ekhethekile ohlangothini ukunyakaza, okuyinto ngempumelelo kakhulu iphele le yimpandla.
ActiveStud ubuchwepheshe Special, okuyinto isebenzisa spikes nge ubuso eziyisithupha, okuhloswe ngazo ukunciphisa unyathela amabhuleki ibanga nokusheshisa okusheshayo izici ithayi.
3D-BIS ubuchwepheshe isicelo lapho ukuklama isondo kuyinto sesimanje slats. Convex izitsha eziyisikhombisa wahlela ngokukhethekile ku ezindongeni sipes neqhaza ukwandisa traction isondo emgwaqeni oshelelayo.
Isimiso esisha ukusatshalaliswa izikopelo ku yimpandla kunomthelela hhayi kuphela ukuthuthukisa izakhiwo inhibitory kwesondo, kodwa futhi ukuncipha umsindo ngesikhathi esebenzayo ngesivinini traffic.
esengeziwe coupling imiphetho unciphise amathuba isondo ilele, eqinisekisa ukushesha kakhulu nokuhlale unyathela amabhuleki, ukusebenza. Ngo womshini amathayi Sava Eskimo Stud nomkhiqizi ulinakile ekhethekile nokwakheka yimpandla. Ngokusebenzisa izimbambo ezikhethekile etholakala engxenyeni emaphakathi isondo, ngcono ukuzinza imoto.
amabhlogo Solid ahlelwe ezindaweni ehlombe, ukukhuthaza self-yokuhlanza isondo phakathi egijima emigwaqweni seqhwa, kodwa futhi ukwandisa ukuzinza nokusimama ngaphansi ikhuluma eziyinkimbinkimbi.
Ziningi multi Ohlangothi yimpandla sipes zenzelwe ukwandisa ukuqonda emigwaqweni ezishelelayo kakhulu. I yimpandla iphethini Sava Eskimo Stud isithombe esihlokweni libonisa. Futhi kukhona ungabona yonke imininingwane ezichazwe ngenhla.
On Sava Eskimo Stud amathayi spike wenziwe ekhethekile bafake ukumelana ingxubevange, okuvumela ukusetshenziswa amathayi 4-5 zonyaka, ebe egcina izici lobuchwepheshe injoloba. ukusatshalaliswa Special of izikopelo ivumela ongaphakeme umsindo isizukulwane ngenkathi sigcina nokwethenjelwa traction.
Ngokuphathelene izakhiwo qualitative we iraba kwakwakhe amathayi Sava Eskimo Stud: umthengi nokubuyekezwa ukumelana bafake lokhu model kuqinisekiswa isiqinisekiso nezinsolo zekhwalithi. Ngezinye ukusebenza ngokucophelela isondo kungathatha 5 zonyaka, ngaphandle ukulahlekelwa abalulekile spikes.
Ukungeza Silica - isithako ekhethekile amathayi ebusika - kunomthelela umsungulo ukuqina zenjoloba. Ngokukhethekile yakhelwe iraba Ukwakheka, asetshenziswe ekukhiqizeni kwalesi imodeli yakhiwa polymer ne izingxenye silicon, okuvumela ukuba ugcine kuyaqina futhi ukuhamba isondo ngisho ngaphansi kwamazinga okushisa aphansi e the nobusika.
Tyres Sava Eskimo Stud: umthengi Izibuyekezo
Winter amathayi njalo abashayeli ezikhethiwe ngokucophelela okukhulu futhi ngokuqapha, ngenxa izakhiwo zabo zincike ukuphepha, induduzo kanye nokwethenjelwa ezimweni ukushayela esinzima sonyaka. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ngokuphathelene abathengi isiRashiya, avame sibhekene kweqhwa.
Ukuze uqinisekise ikhwalithi imodeli, kubalulekile ukuba uhlole umthengi ukubuyekezwa. Sava Eskimo Stud ezazithandwa abashayeli abaningi njengoba okunokwethenjelwa, engabizi, elithambile, amathayi ukugqoka nemithi. Ngaphezu kwalokho, abathengi uphawule lezi zici ezinhle imodeli, njengoba induduzo acoustic at ukusebenza ngesivinini, nokugcina kuyaqina, ukumelana enhle kakhulu skid ku emigwaqweni eneqhwa, impendulo okuthembekile ithrekhi, oshipovka eqinile okuthembekile, intengo okungabizi.
Noma kunjalo, abashayeli abaningi kwesokunxele amathayi idatha kanye nokubuyekeza ezimbi. Sava Eskimo Stud, ngokuvumelana umthengi izikolo babe bokwenza lokhu okulandelayo: a sidewall isondo uthambile kakhulu, babonakala bethambekele kakhulu umonakalo lokukhanda. Njengoba yaziwa, unokungaxhumani lateral e tubeless amathayi ayikwazi ukulungiswa, ngaleyo ndlela, ngemva nomonakalo onjalo kwesondo kumelwe ithathelwe. Futhi, abanikazi abaningi imoto ithi kunyuke umsindo ngesikhathi kugqekezwa. Ngemva kokudlulisa lokuqala 200,000 amakhilomitha kunomsindo kuyehla.
Izakhiwo Nyathela iphethini
Sava Eskimo Stud amathayi ube iphethini yimpandla ukuthi liveza ukusebenza okuhamba phambili kanye nezici e ukusebenza ezisemadolobheni. I ewusizo kunazo uma ushayela ku izinga evele egandayiwe. He is ngokuphelele ukuba kuhlalwe ngesikhathi izwe uhambo, ngoba abazi ukubhekana elithambile ukungcola komgwaqo. Ukuhlukanisa izici iphethini - is aphansi ugingqe ukumelana, kakhulu idatha acoustic, okusezingeni eliphezulu bafake ukumelana.
Njengezinye onobuhle, oluqanjwe Sava Tyres, futhi ibilokhu ukuhlola kanye Sava Eskimo Stud. idatha Test iTire abaphumelela, okubonisa imiphumela elandelayo:
Braking ibanga eqhweni ngesivinini 50 km / h usebenzisa antiprobuksovyvaniya sesistimu 54,8 m.
Ukusheshisa ku enamathela ezineqhwa ku ezahlukene 5 kuya ku-20 km / h kwaba 4.5 s.
Indlela braking emigwaqeni seqhwa kwebhizinisi lapho uqhuba ngesivinini 80 km / h kwaba 57,1 m.
Ukusheshisa isikhathi emgwaqeni eneqhwa ku uhla kusuka 5 kuya 35 km / h kwaba 5.8 s.
ephumula ibanga asphalt ezimanzi lapho uqhuba ngesivinini 80 km / h nge ABS zazilingana 33 m.
Misa ibanga komgandayo ezomile kwebhizinisi lapho uqhuba ngesivinini 80 km / h usebenzisa ABS kwaba 27,3 m.
Ngokusho kochwepheshe, amathayi Sava Eskimo Stud test kwahamba kahle ngempela, ibonisa imiphumela emihle.
Model Sava Eskimo Stud MS zingathengwa uhla kusuka 1670 kuya ruble 3500 ibhasi ngalinye. Intengo kuyahlukahluka kuye ngobukhulu isondo, isilinganiso ijubane futhi umthwalo. Ayanda ukusebenza, lo ezibizayo kuzobiza iqoqo ebusika izicathulo yezimoto. Umthengi libuyekeza Sava Eskimo Stud inothi emnandi kunazo ukubaluleka ibhasi idatha. Futhi ngokuvamile kuba umbandela esiyinhloko Ukukhetha kwabo.
Osayizi namakhodi amathayi
Tyres Sava Eskimo Stud h Stud etholakala izici ezilandelayo.
Usayizi - 175 / 70R13, ANN - 82T.
Usayizi - 175 / 65R14, ANN - 82T.
Usayizi - 185 / 65R14, ANN - 86T.
Usayizi - 185 / 70R14, ANN - 88T.
Usayizi - 185 / 60R15, ANN - 88T.
Usayizi - 195 / 65R15, ANN - 91T.
Usayizi - 205 / 65R15, ANN - 94T.
Usayizi - 205 / 55R16, ANN - 91T.
Usayizi - 215 / 65R16, ANN - 98T.
Tyres Sava Eskimo Stud nomkhiqizi inikeza okungabizi price range. Uma siqhathanisa izici zalezi amathayi onobuhle efanayo evela kwamanye abakhiqizi, singasho ngokuphepha ukuthi kulesi simo, amanani aphansi akuyona inkomba eliphansi. ITire show izakhiwo kakhulu ezidingekayo uma ushayela ku inselele imigwaqo ebusika.
Sava inkampani namuhla uye baphumelele omkhulu futhi iyathandwa emhlabeni wonke. Manje ingenye ngobukhulu futhi kuphumelele kakhulu abakhiqizi isondo eYurophu izimoto, amaloli, futhi Suv.
Zonke amasondo ekhiqizwa ngesikhathi izitshalo Sava, kudlule ngokucophelela ekuhlolweni ikhwalithi. Ngaphambi timbiwa kwamanye amazwe imikhiqizo lwahlolwa ukuze yokukhiqiza ukukhubazeka, ngakho lapho uthenga Sava amathayi, ungaqiniseka bagomela ngokuthi imali uyosindisa ngokuphepha.
Kuyinto ephawulekayo ukuthi inkampani ithumela kwamanye amazwe angaphezu kuka-90% azo zonke ekhiqizwa imikhiqizo yayo. Ikhwalithi okumangalisayo kwesibonakaliso impahla iraba, ubuchwepheshe esiyingqayizivele, nedizayini amathayi - konke lokhu inkampani Sava emelela kukhiqizwa futhi ithengiswe umkhiqizo wawo.
Hong Kong - izwe noma idolobha?